Maitiro matsva pamusika weSpanish wemusika | Ehupfumi Zvemari
Zvichida vatengesi vazhinji havazive kuti kumwe kuchengetedzeka kuri kuoneka mumisika yemari kuitira kuti vakwanise kupinzwa basa. Izvi ndizvo zvisingazivikanwe zvikumbiro zvemusika wemasheya asi izvo zvinogona kushandiswa kuita kuti mashandiro abatsire, kunyangwe paine njodzi yekuti kuchengetedzeka kwakatomisikidzwa mukuenderera kwemusika kushomeka. Gore rega rega anopfuura gumi emakambani emhando idzi anobuda uye ayo anowanzo kuve akabatanidzwa mune izvo zvinonzi Imwe nzira Stock Market (MAB). Iwo akanyorwa aine yakaderera kwazvo capitalization uye anogona kukutungamira iwe kuti uwedzere radar yemabasa ako pamusika wemasheya.
Iyo ikambani inotsvaga mumisika yemari nzira dzayo ku tora mari kuita yavo bhizinesi mitsara. Ehe, iwo haazi makambani anozivikanwa kwazvo, kunyangwe kune vashoma uye varipakati varimari uye izvi zvinoita kuti zviome kuti huwandu hwekutengesa huve hwakakura zvakakwana kuti uzvione kubva ikozvino. Hazvishamisi kuti kune mashoma mazita akakurudziranwa akabatana ruoko muzvikamu zvemusika wemasheya. Ichi chinhu chinokonzera kusagadzikana mukuchinja kwemitengo yavo kuve kwakanyanyisa.
Kune rimwe divi, zvinogona kuoneka kuti mutsauko uripo pakati pavo kunonyanyisa uye zvishoma mitengo iwo akakosha kwazvo. Uye mune chero zvazvingaitika, pamusoro peizvo zvinoratidzwa neinotungamira tsika yemarudzi equities. Nemazita mashoma kwazvo, mitengo inogona kutakurwa ichienda kune imwe nzira kana imwe uye mune ino mamiriro zvinogona kutaurwa kuti iwo maitiro anonyanya kugadziriswa nemaoko akasimba emisika yemari. Naizvozvo, hapana mubvunzo kuti njodzi dzakanyanya kunonoka uye unofanirwa kutora hanya zvakanyanya paunenge uchiisa mari mune izvi zvemari zvinhu. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
1 Maitiro muMAB
2 Maitiro matsva: Almagro Capital
3 Euripo anotanga kutengesa
4 Zvimwe zvinowedzera kuMAB
5 Hukama nemari yemari
6 Zvibvumirano zvinobva
7 Kuita kwakanaka kweMARF
Chikamu chakanaka chezviitiko izvi mumisika yemari inoitika mune Imwe Soseti Soko, inonyatso kuzivikanwa seMAB. Ndiko uko kukosha kwe yakaderera capitalization uye chero zvakadaro inoreva kumakambani madiki kwazvo ayo anoda kuzvipa mari mumisika yemari. Mazita avo achave matsva kwauri uye kunyangwe ivo vane ruzivo kwazvo varairidzi mumisika yemari. Izvi zvinodaro nekuti vanga vari mumamiriro ezvinhu kwenguva pfupi. Mune mamwe mazwi, iwo akanyorwa pane imwe misika yemaketi uye nekudaro haina kuzivikanwa pakati pevamiriri vemari vakasiyana. Asi pane izvo zvinopesana.
Kune rimwe divi, ivo vanozivikanwa ne michinjikwa mumitengo yavo iwo haana kukwirira seakanyanya mutsika tsika. Ivo vane zvimwe zvekucheka panguva yekutengesa chikamu umo mitengo yavo yakaiswa. Izvi mukuita zvinoreva kuti zvakanyanya kunetsa kushanda navo kubva pane chero maonero. Uku kumwe kwekukanganisa kwaunofanira kutarisana nezviito zvakakosha izvi. Musiyano wakakura uyo uchafanirwa kutariswa.
Maitiro matsva: Almagro Capital
Iyo MAB Bhodhi revatungamiriri yakabvumidza kuiswa kwekambani Almagro Capital Socimi mushure mekuongorora ruzivo rwakapihwa nekambani uye kamwe iyo mushumo wekuongorora inofadza kubva kuConordination uye Incorporations Committee. Kutanga kwekutaurirana kwekambani kwakaitika muna Ndira 16. Kambani yekutengesa yekambani ichave "YAC1". Renta 4 Corporate, SA ndiye Akanyoreswa Advisor wekambani uye Renta 4 Banco, SA ichaita seLiquidity Provider.
Bhodhi rekambani revatungamiriri rakagadza kukosha kukosha kune yega yega yemigove yayo ye1,07 euros, iyo inomiririra huwandu hwakazara hwekambani yemamiriyoni gumi emadhora. Chero zvazvingaitika, iko diki capitalization chengetedzo iyo inosanganisira zvine njodzi mashandiro, zvirinani zveiyo nguva nekuti haina nhoroondo yenhoroondo umo kuita yakavimbika enzaniso. Saizvozvo, haina mutengo wekutora kuti uitore seinongedzera sosi yekushanda kwayo mumisika yemari.
Euripo anotanga kutengesa
Bhodhi revatungamiri veMAB rakabvumawo kuiswa kwekambani yeEuripo Properties Socimi mushure mekuongorora ruzivo rwakapihwa nekambani uye kana ongororo yakanaka yekuongorora nekomisheni yekubatanidza yaburitswa. Kutanga kwekutaurirana kwekambani kwakaitika mumazuva ekutanga egore idzva.
Kune rimwe divi, kodhi yekutengesa yekambani ichave "YEPS", uye kondirakiti yayo ichaitwa kuburikidza nehurongwa hwemitengo. "Kugadzirisa". Renta 4 Corporate ndiye chipangamazano akanyoreswa uye Renta 4 Banco ichaita semupi wemari. Bhodhi rekambani revatungamiriri rakamisikidza kukosha kukosha kune yega yega zvikamu zvaro zve 22 euros, iyo inomiririra huwandu hwakazara hwekambani yemamiriyoni zana emamiriyoni euros.
Zvimwe zvinowedzera kuMAB
Iyo MAB bhodhi revatungamiriri yakabvumidza kuisirwa mumusika weRendi uye Kurarama mushure mekuongorora ruzivo rwakapihwa nekambani uye kamwe chete mushumo wakanaka wekuongorora we kubatana pamwe nekubatanidzwa. Kutanga kwekutaurirana kwakaitika mumazuva ekupedzisira egore rapfuura. Nezvi wedzero izvi, huwandu hweSocimis hwakabvumidzwa mukutengesa paMAB mu2018 inosvika makumi maviri, ichiwedzera kumakambani makumi matanhatu nematanhatu. Nemakambani mashanu akanyorwa paStock Exchange, huwandu hwese hweSocimis hwakamira pa20.
Kodhi yekutaurirana ichave "YARP"; uye iyo yaVivenio, "YVIV". Kondirakiti yemakambani ese ari maviri ichaitwa kuburikidza ne "kugadzirisa" mutengo wekumisikidza sisitimu. Kune rimwe divi, Renta 4 Corporate ndiye chipangamazano akanyoreswa uye Renta 4 Banco inoshanda semubatsiri wemari mumatambudziko maviri ataurwa. Ipo pane izvo zvinopesana, kukosha kwereferenzi kune yega yega yezvikamu zveArrienda kwakaiswa pa2,74 euros, kuunza kukosheswa kwekambani ku56,4 mamirioni euros. Kune rimwe divi, Vivenio akagadza iwo mutengo wega wega muhafu ye1,15 euros, iyo inomiririra huwandu hwese hwemamirioni e329,4 miriyoni.
Hukama nemari yemari
Sipanish stock market yakatengesa mamirioni 587.479 euros muzvikwereti mu2018 mushure mekunyoresa mamirioni emamiriyoni e38.768 muna Zvita, 5,4% pasi paNovember uye 18,7% pasi pemwedzi mumwe chete wegore rapfuura. Iyo huwandu hwekutaurirana kwemwedzi yaive mamirioni 3,1, 15,8% pasi pemwedzi wapfuura uye 5,7% pasi paDecember 2017. Muchikamu chemaWarrant uye maSitifiketi, 41,3 mamirioni euros akatengeswa muna Zvita 2018, 16,9% pasi pemwedzi wapfuura uye 44,6% zvimwe kupfuura muna Zvita 2017. Huwandu hwekutaurirana hwakamira pa7.059, 11,5% pasi pane munaNovember uye 12,4% kupfuura iwo iwo mwedzi wegore rapfuura. Huwandu hwenyaya dzakabvumidzwa mukutengesa muna Zvita dzaisvika 5.173, 9% pasi pegore rapfuura.
Muchikamu cheExchange Traded Funds (ETF), mamirioni e181,4 akatengeswa, 22,7% pasi pemwedzi wapfuura uye 39,4% pasi pemwedzi mumwe chete wegore rapfuura. Huwandu hwekutaurirana hwaive 6.628, 42,8% kupfuura munaNovember uye 12,1% kupfuura iwo iwo mwedzi wegore rapfuura. Musika we Mhedzisiro yemari yakadzingwa 2018 iine vhoriyamu yezita yakatengeswa yemamirioni e683.243. Yakaona kutengesa muchikamu cheFutures pane IBEX 1,2 kuwedzera ne35% mugore rese, nepo Sarudzo pane index yakapa 2,8%, mushure mekuvandudza ne16,6% mumwedzi wekupedzisira weanus.
Kutengesa muzvibvumirano zvakatorwa zvine chekuita nekukomberedzwa kwenjodzi yemugovano yakanyoreswa kuwedzera kwe63,1% mu Ramangwana pane iyo IBEX Kugovana Kukanganisa. Sarudzo dzeStock dzakawedzera kutengesa kwavo mumwedzi ne94,1% (+ 36,2% zvichienzaniswa nemwedzi mumwe chetewo wa2017), ndokuvhara gore maererano na2017. Nzvimbo yakashama yemisika yeBME's Financial Derivatives yakadzinga Zvita 2,3% pamusoro peyakaenzana mwedzi wapfuura. Sarudzo pane IBEX 35 yakawedzera nzvimbo yavo yakavhurika ne13,8% uye Sarudzo dzeStock ne4,3%.
Nezve iyo fixed income, iro vhoriyamu yakatengeswa mugore raive zviuru mazana maviri nemazana manomwe nemakumi manomwe neshanu euros, 200.757% kupfuura mugore rapfuura. Kuhaya muna Zvita kwakawedzera 45,1% zvine chekuita nenguva yakafanana yegore rapfuura nekuda kwekubhadharwa kwenyika uye epasi rose Zvikwereti Zvevanhu.
Kuita kwakanaka kweMARF
Huwandu hweiyo nyaya nyowani yakanyorwa yekutengesa paMARF muna Zvita yakasvika 671 mamirioni euros, izvo zvinomiririra kuwedzera kwe226% zvichienzaniswa nenguva imwecheteyo muna 2017. Vhoriyamu yakaunganidzwa pakupera kwegore ra2018 yaive mamirioni e6.357, mushure mekukura ne60,1% mugore. Iyo yakatanhamara vhoriyamu iri kutenderera mumusika uyu yakasvika 3.320 mamirioni euros, iyo inomiririra kukura kwegore rega kwe46,9%.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chengetedzo nyowani pamusika weSpanish wemusika